Fanahy Masina ao amin' ny jodaisma - Wikipedia
Ny Fanahy Masina dia inoana ao amin' ny jodaisma ho toetra sy herin' Andriamanitra ary fiantraikan' izany hery izany amin' izao tontolo izao na amin' ny zavaboary amin' ny toejavatra voafaritra. Atao hoe רוח הקודש‎ / ruakh ha-kodesh ny Fanahy Masina amin' ny teny hebreo.
1 Ny Fanahy Masina araka ny Baiboly hebreo
1.1 "Fanahy Masina"
1.2 "Fanahin' Andriamanitra"
Ny Fanahy Masina araka ny Baiboly hebreoModifier
Ny andian-teny hoe Fanahy Masina dia fandraisana sy fandikana ny teny hebreo hoe רוח הקודש / ruakh ha-kodesh (midika hoe "fanahy masina"). Hita ao amin' ny Baiboly amin' ny teny hebreo koa ny hoe רוּחַ קָדְשְׁךָ / ruakḥ qodshəka, "ny fanahinao masina" (Salamo 51.11), sy רוּחַ קָדְשׁוֹ / ruakḥ qodshō, "ny fanahiny masina" (Isaia 63.10-11).
Isaia/Izaia 63.10-11 "10 Fa ireo kosa dia niodina ka nanome alahelo ny Fanahy Masiny (רוּחַ קָדְשׁוֹ); dia tonga fahavalony Izy ka niady taminy. Ary ny olony dia nahatsiaro ny andro taloha ela, dia ny tamin' i Mosesy. 11 Aiza Ilay nitondra azy mbamin' ny mpiandry ondriny niakatra avy tamin' ny ranomasina? Aiza Ilay nametraka ny Fanahy Masiny tao aminy, ..." (Ny Baiboly)
Genesisy/Jenezy 1.2 "Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana; ary aizina no tambonin' ny lalina. Ary ny fanahin' Andriamanitrananomba tambonin' ny rano." (Ny Baiboly)
1 Samoela 16.13 "Dia noraisin' i Samoela ny tandroka nisy diloilo, ka nohosorany teo afovoan' ny rahalahiny io; ary hatramin' izany andro izany sy tamin' ny andro manaraka, dia nidina tamin' i Davida ny fanahin' ny Tompo Dia niainga Samoela nankany Ramata." (Ny Baiboly Masina)
Salamo 143.10 "Ampianaro hanao ny sitraponao aho; Fa Hianao no Andriamanitro; Aoka ny Fanahinao tsara no hitarihanao ahy amin' izay tany marina." (Ny Baiboly)
Isaia/Izaia 44.3 "Fa handatsaka rano amin' izay mangetaheta Aho, ary riaka ho amin' izay tany karankaina; Eny, handatsaka ny Fanahiko amin' ny taranakao Aho, ary ny fitahiako ho amin' ny terakao." (Ny Baiboly)
Joela/Joely 3.1 "Ary rehefa afaka izany, dia handatsaka ny Fanahiko amin' ny nofo rehetra Aho; Dia haminany ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo, ny lahiantitrareo hanonofy, ary ny zatovonareo hahita fahitana."
Fanahy Masina ao amin' ny kristianisma
Fitsilovan' ny Fanahy Masina
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanahy_Masina_ao_amin%27_ny_jodaisma&oldid=1036498"
Dernière modification le 23 Aogositra 2021, à 09:57
Voaova farany tamin'ny 23 Aogositra 2021 amin'ny 09:57 ity pejy ity.